Mihevitra ny Brits fa tokony hitohy amin'ny sidina ny saron-tava
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Mihevitra ny Brits fa tokony hitohy amin'ny sidina ny saron-tava
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Na eo aza ny fanalefahana ny fameperana, ny ankamaroan'ny olona dia mbola mahatsapa fa mety sy mety ny manao saron-tava amin'ny sidina, mifanaraka amin'ny politikan'ny zotram-piaramanidina maro.
Telo amin'ny efatra amin'ny olon-dehibe UK no mihevitra fa tokony hanohy ny saron-tava ny mpandeha amin'ny sidina, araka ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Misy fifanarahana midadasika amin'ny sokajin-taona rehetra, fa ireo 65 taona mahery no tena te hahita ny fitazonana ny fitsipika, hoy ny tatitra nataon'ny WTM Industry Report, navoaka tao amin'ny WTM London, hetsika lehibe eran-tany amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana, izay hitranga amin'ny manaraka. telo andro (Alatsinainy 1 – Alarobia 3 Novambra) ao amin’ny ExCeL – Londres.
Rehefa nanontaniana hoe: Tsapanao ve fa tokony mbola hanaovana saron-tava eny amin'ny fiaramanidina? 73% no namaly eny – ambony lavitra noho ny 14% izay tsy nanaiky. Ny 13% ambiny kosa nilaza fa tsy matoky tena.
Ny vondrona mihoatra ny 65 taona no ampahany amin'ny fiaraha-monina ankasitrahana indrindra, ka ny 82% no milaza fa tokony hanaovana saron-tava ao anaty sidina, hoy ny fitsapan-kevitry ny mpanjifa UK 1,000.
Ireo ao amin'ny sokajin-taona 25-64 dia saika mizara mitovy amin'ny fifanarahana, ka 73% amin'ny 55-64s; 74% amin'ny 45-54s; 73% amin'ny 35-44s ary 72% amin'ny 25-34s milaza fa tokony hanao saron-tava ny mpandeha.
Amin'ireo taranaka tanora, 62% amin'ny 18-21s ary 60% amin'ny 22-24s no mino fa tokony hanohy handidy ny fanaovana saron-tava ny zotram-piaramanidina.
Niova ny fitsipika momba ny fanaovana saron-tava tany Angletera tamin'ny 19 Jolay, rehefa nihena ny fameperana.
Nanomboka tamin'ny 19 Jolay, tsy fepetra ara-dalàna intsony ny fanaovana saron-tava ao an-trano any Angletera, na dia nanentana ny vahoaka aza i Boris Johnson mba hanohy hanarona ny tavany amin'ny 'toerana feno olona sy voahidy'. Mihatra any Wales sy Scotland ny fitsipika saron-tava henjana kokoa.
Ny ankamaroan'ny zotram-piaramanidina, ao anatin'izany ny Ryanair, easyJet, TUI ary Jet2 dia manao politika saron-tava tsy maintsy atao ho an'ny mpandeha rehetra enin-taona no ho miakatra, ary koa ny mpiasa ao amin'ny kabine, raha tsy hoe voavaha.
Hoy ny talen'ny WTM London Exhibition Simon Press: "Mazava ho azy, na dia eo aza ny fanalefahana ny fameperana, ny ankamaroan'ny olona dia mbola mahatsapa fa mety sy mety ny manao saron-tava amin'ny sidina, mifanaraka amin'ny politikan'ny zotram-piaramanidina maro."